ओलीसँगकाे भेटपछि धवलशमशेरले भने- अब पाँच दललाई चुनौती त दिनुपर्‍यो | ईमाउण्टेन समाचार
ओलीसँगकाे भेटपछि धवलशमशेरले भने- अब पाँच दललाई चुनौती त दिनुपर्‍यो
नेपालगन्ज । सत्तारुढ पाँच दलबीच निर्वाचनमा गठबन्धन हुने भएपछि नेकपा एमाले र राप्रपाबीच पनि गठबन्धनको छलफल सुरु भएको छ । स्थानीय तहमा मात्र कि प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गर्नेबारे दुई दलबीच छलफल सुरु भएको हो ।
बिहीबार साँझ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) महामन्त्री डा. धवलशमशेर राणाबीच भेटवार्ता भएको छ । भेटवार्तापछि डा. राणाले पाँच दलबीच गठबन्धन भएपछि एमाले-राप्रपा गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको बताए ।
‘गठबन्धन हामीले गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ । पाँच दललाई चुनौती त दिनुपर्‍यो । त्यसकै लागि प्रारम्भिक छलफल भएको हो’, राणाले भने, ‘अध्यक्ष ओली र मबीच अब पार्टीमा छलफल गर्ने भन्ने कुरा भएको छ ।’ भेटवार्ता सकारात्मक भएको पनि उनले बताए ।
राजनीति‐मा वर्गिकृतdhawal shasher rada, kp oli, nepali news, nepalia news, oli, धवलशमशेर
जुम्ला खस सभ्यताको इतिहास हो : एमाले अध्यक्ष ओली
प्रधानमन्त्रीको तीन प्रतिवद्धतापछि लोसपा उत्साहित
सुर्खेत जिससमा एमाले-माओवादी गठबन्धन विजयी